Fitsipika momba ny teknolojia FMBR - JDL Global Environmental Protection, Inc.
FMBR no fanafohezana ny bioreactor membrane facultative. Ny FMBR dia mampiasa ny zavamiaina bitika bitika hamoronana tontolo iainana sy hamorona rojom-pisakafoanana, ahazoana mamorona tsiranoka malemy ara-organika ambany ary hihena ny loto. Noho ny effets fisarahana mahomby amin'ny membrane, ny effet fisarahana dia tsara lavitra lavitra noho ny tanky sedimentation nentim-paharazana, mazava tsara ny effluent voatsabo, ary ambany dia ambany ny resaka mihantona sy ny turbidity.
Ny fisefoana endogenous an'ny sela no tena mihena amin'ny fihenan'ny fotaka organika. Noho ny fifantohan'ny biomassa lehibe, ny SRT lava ary ny toetran'ny DO ambany, ny nitrifiers divers, ny zavamananaina amonoana amoniaka (ao anatin'izany ny AOA, Anammox), ary ny denitrify dia afaka miara-miaina ao anatin'ny tontolon'ny fikajiana mitovy amin'izany, ary ireo mikraoba ao amin'ilay rafitra dia mifampiorina mba hiforona tranokala sakafo mikraoba ary esory C, N ary P miaraka.
Mampiavaka ny FMBR
● Fanesorana ny karbonina, azota ary phosoreo miaraka
● Fanapoahana ny fotaka sisa tavela amin'ny organika
● Kalitao mivoaka tsara
● Fanampiana simika farany ambany amin'ny fanesorana N & P
● Fotoana fohy fanamboarana
● dian-tongotra kely
● Fampihenana angovo ambany / ambany angovo
● Mampihena ny gazy karbonika
● mandeha ho azy sy tsy mitandrina
Karazana fanamboarana FMBR WWTP
Fonosana FMBR Fitaovana WWTP
Ny fitaovana dia mifangaro tanteraka, ary ny asan'ny sivily dia tsy mila manamboatra ny fitambaran-tarehy, ny fototr'entana ary ny tanky fantsona fotsiny. Kely ny dian-tongotra ary fohy ny vanim-potoana fananganana. Izy io dia mety amin'ny toerana mahafinaritra, sekoly, faritra ara-barotra, trano fandraisam-bahiny, làlambe, fiarovana ny fahalotoan'ny rano, fitsaboana itsinjaram-pahefana ary toeram-pitsaboana any amin'ny faritra onenana, tetik'asa vonjy maika, fanavaozana ny WWTP.
Concrete FMBR WWTP
Ny endrik'ilay zavamaniry dia hatsarana miaraka amin'ny dian-tongotra kely, ary azo aorina ao anaty WWTP ekolojika, izay tsy hisy fiatraikany amin'ny endrik'ilay tanàna. Ity karazana WWBR WWTP ity dia mety amin'ny tetik'asa WWTP monisipaly.
Fomba fitsaboana FMBR
Ny teknolojian'ny fitsaboana rano maloto mahazatra dia manana fizotran'ny fitsaboana maro, noho izany dia mila tanky marobe ho an'ny WWTP, izay mahatonga ny WWTP ho rafitra sarotra misy dian-tongotra lehibe. Na ho an'ny WWTP kely aza dia mila fiara mifono vy marobe koa izy io, izay hitarika ho amin'ny vidin'ny fananganana ambony kokoa. Io ilay antsoina hoe "Scale Effect". Mandritra izany fotoana izany, ny fizotran'ny fitsaboana rano maloto mahazatra dia hamoaka maloto be dia be, ary mavesatra ny fofona, izay midika fa ny WWTP dia azo aorina akaikin'ny faritra onenana. Io ilay olana antsoina hoe "Tsy ao an-tokotaniko". Miaraka amin'ireo olana roa ireo, ny WWTP nentim-paharazana dia matetika amin'ny habe lehibe sy lavitra ny faritra onenana, koa ilaina ny rafitra fantsona lehibe manana fampiasam-bola avo. Hisy ihany koa ny fidiranana sy fidirana an-tsokosoko ao amin'ny rafitry ny tatatra, tsy handoto ny rano ambanin'ny tany ihany izy io, fa hampihena ny fahombiazan'ny fitsaboana WWTP koa. Araka ny fanadihadiana sasany, ny fampiasam-bolan'ny tatatra dia manodidina ny 80% amin'ny fampiasam-bola amin'ny rano maloto.
Ny teknolojia FMBR, izay novolavolain'i JDL, dia afaka mampihena ny rohy fitsaboana maro ny teknolojia nentim-paharazana ho rohy FMRB tokana, ary mifintina be ny rafitra ary fitaovana manara-penitra, ka ho kely kokoa ny dian-tongotra ary ho mora kokoa ny asa fananganana. Mandritra izany fotoana izany dia vitsy ny poti-potika tavela tsy misy fofona, ka azo amboarina mifanila amin'ny faritry ny fonenana izy io. Ho famaranana, ny teknolojia FMBR dia mety tsara amin'ny fomba fitsaboana itsinjaram-pahefana, ary mahatsapa ny "On-site Collect, Treat and Reuse", izay hampihena ny fampiasam-bola amin'ny rafitry ny tatatra.
Ireo WWTP nentim-paharazana dia mazàna mampiasa fiara mifono vy mivaingana. Ity karazana WWTP ity dia mandray dian-tongotra lehibe misy firafitry ny zavamaniry sarotra sy fofona mavesatra, ary tsy dia misy dikany ny endrika ivelany. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny haitao FMBR miaraka amina endri-javatra toy ny fizotrany tsotra, tsy misy fofona ary tsy misy fotony sisa tavela, JDL dia afaka manangana ilay zavamaniry ho "rafi-pitsaboana ambanin'ny tany sy ny zaridaina etsy ambony" WWTP miompana amin'ny rano maloto sy ny fampiasana azy indray, izay tsy afaka mamonjy dian-tongotra fotsiny fa manome ihany koa tontolo maitso tontolo iainana ho an'ny trano manodidina. Ny foto-kevitry ny WWBR biolojika FMBR dia manome vahaolana sy hevitra vaovao momba ny fanangonam-bokatra sy fanodinana ary WWTP sariaka.